အစဉ်အဆက်အဖြစ်စင်ကြယ်သောBayrampaşaဘတ်စ်ကားဘူတာရုံကားပါကင်တွေအများကြီး - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်အစဉ်အဆက်သည်စင်ကြယ်အဖြစ်Bayrampaşaဘတ်စ်ကားဘူတာရုံကားပါကင်တွေအများကြီး
11 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, PHOTOS, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
bayrampasa အဆိုပါယာဉ်ရပ်နားတွေအများကြီးကတည်းကပိုပြီးယခင်ကထက် clean otogarı
အားလပ်ရက်များ၏အိမ်Bayrampaşaလေ့လာမှု၏အဆုံးသို့ရောက်ရှိဘတ်စ်ကားဘူတာရုံကားပါကင်လွှဲပြောင်းİSPARKရှေ့တော်၌ထိုနောက်ဆုံးအစည်းအဝေးတွင်ယူဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီ IBB ။ ဟောင်းများကက်ဘိနက်, ဖယ်ရှားသစ်တွေအရပျသို့သွင်းထားခဲ့ကြသည်။ အောက်ပိုင်းကားပါကင်ထဲကနေလွန်မဘတ်စ်ကားဘူတာရုံရဲ့ရှုပ်ထွေးISTAÇအသင်းများအားဖြင့်သန့်စင်ခဲ့သည်။ ဒေသတွင်း၌လုံခြုံရေး, İSTGÜVနှင့်ရဲအဖွဲ့များကပံ့ပိုးပေးပါသည်။
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IBB) နှင့် Anatolia နှင့် Thrace ဘတ်စ်ကားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှအကြားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယာဉ်ရပ်နားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသဘောတူညီချက်, မေလ52019 အတွက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဇူလိုင်လ 11 အပေါ် IMM ညီလာခံ session တစ်ခု, အစည်ပင်သာယာယာဉ်ရပ်နားကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းခွဲİSPARKခေတ်မှခွင့်ပြုချက်ပေးထားခဲ့သည်။ အတွေ့အကြုံရှိတရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲပြီးနောက် 8 သြဂုတ်လအတွင်းကျင်းပခဲ့သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Yavuz Erkut ISPARK စီမံခန့်ခွဲမှု, ISTAÇ, İSTGÜVနှင့်ရဲအဖွဲ့များ, Bayrampaşaဇူလိုင်လ 15 အဆိုပါယာဉ်ရပ်နားအာဇာနည်နေ့ဘတ်စ်ကားဘူတာကိုကျော်ယူမယ့်ခဲ့သည်။ လွှဲပြောင်းလုပ်ငန်းစဉ် Eurasian Terminal နှင့်စစ်ဆင်ရေး၏ဝန်ကြီးအဖွဲ့နှင့်အတူဖယ်ရှားခဲ့သည်ပြီးနောက်, အစားကİSPARKပြခန်းထားရှိခံရဖို့စတင်ခဲ့ပါသည်။ cabin နေရာချထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုယနေ့၏အဖြစ်အပြီးသတ်ခဲ့သည်။
သူကတစ်ဦးခရီးစဉ်အောက်ထပ်ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံမှယာဉ်ရပ်နားအများကြီးISTAÇအသင်းများအားဖြင့်ရှင်းလင်းခဲ့သည်ကာလအတွင်းကလိုအပ်သောအစီအစဉ်များကိုဖန်ဆင်းမျက်မြင်ကြောင်းတို့၏အညစ်အကြေးများ၏မြင်ကွင်းကိုအတွက်အစီအစဉ်အပေါ် IMM ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğluရဲ့ဘတ်စ်ကား terminal ကိုစစ်ဆေးခြင်း။ မနက်စောစော Al-Adha တာဝန်ခံအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသွားမှာပါကာလအတွင်းယာဉ်ရပ်နား, ISPARK အားဖြင့် operated လိမ့်မည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, နိုင်ငံသားများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကİmamoğluလူမှုရေးမီဒီယာနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များကားကိုပန်းခြံ၏အမြန်နှုန်းနှင့်အတူ၎င်းတို့၏စိတ်ကျေနပ်မှုရှိပါကြောင်းရောက်ရှိခဲ့သည်။
BayrampaşaİSPARKဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံကားပါကင်တွေအများကြီးမှလွှဲပြောင်း 09 / 08 / 2019 Bayrampaşaဘတ်စ်ကားဘူတာယာဉ်ရပ်နားအများကြီး, ထိုညီလာခံအားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီတရားဝင် IMM IMM İSPARKကုမ္ပဏီလွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ လွှဲပြောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ် IMM Yavuz Erkut အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့သူ့အဖွဲ့စဉ်အတွင်းအနီးကပ်အလုပ်လုပ်လိုက်ကြ၏။ ယနေ့အဆုံးသတ်Bayrampaşaကာလအတွက်ဘတ်စ်ကားဘူတာ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို၏လက်မှာဘတ်စ်ကားဘူတာရုံကားပါကင်တွေအများကြီးမေလတွင်အဆုံးသတ်ကုမ္ပဏီ၏စာချုပ်ဖို့အခွင့်အရေးများကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း, အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ညီလာခံကိုလည်းဇူလိုင်လအတွင်းဘတ်စ်ကားဘူတာရုံကားပါကင်5İSPARKနှစ်ပတ်လည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း session ကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ တရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏ပြီးစီးအတူဘတ်စ်ကားဘူတာရုံမှာကားတစ်စီးပန်းခြံလည်ပတ်ခွင့်ယခုအခါတရားဝင်İSPARKရှိပါတယ်။ İMAMOĞLU, အ IMM က "အင်္ဂါနေ့ကသတင်းစာမှလက်ခံရရှိသောနောက်ဆုံးဖန်ဆင်းတော်မူပြီဟုဆိုသည်ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğlu" ကြာသပတေးနေ့ကျနော်တို့ OTOGARD " ...
သငျသညျ Sekaray Trackless Cable ကိုကားတစ်စီးလမ်းရထားငါ Verel ဖြစ်သွားဖြစ်သွား 22 / 01 / 2014 သငျသညျ Sekaray Trackless Cable ကိုကားတစ်စီးလမ်းရထား Verel ဖြစ်သွားဖြစ်သွား: အ Tram အခုတော့မုသားင်ခဲ့သလား SEKARAY လမ်းရထားသငျသညျကွကုနျအံ့, ထိုကေဘယ်လ်ကားကိုသာဖြစ်ပျက်! Trackless ပုံဖမ်းတွန်းလှည်း ... သို့မဟုတ် ... ကျနော်တို့အမြဲဖွင့်သွားကြကုန်အံ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ် Seine အချို့လေးနက်ကိစ္စများရေးလိုက်တာပေါ့! ဆိုလိုသည်မှာ "လမ်းရထား" ပြောကြားခဲ့့သည်က ... ငါ့ကိုယုံကျနော်တို့တစ်နိုင်ငံလုံးမျက်နှာပျက်ခြင်းရှိကြပါပြီ။ နိုင်ငံများအသင်းကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူ messing ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်တစ်ဦး jape ။ တောင်မှမီဒီယာဘာသာစကားသို့လဲသေကြပြီ။ ဆာ, မြို့မှ trackless လမ်းရထားကိုငါဆောင်ခဲ့မည် "ဟုအဆိုပါပင်လယ်ရောက်စေဖို့ Konya" ပဲကြိုက်နှစ်သက်သည်။ မည်သူမဆိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ messing လျှင်ရက်အနည်းငယ်လျှင်, ရာဇဝတ်မှု, ထိုမြို့တော်ရှိပဲ! ပထမဦးစွာသူတို့ SEKARAY ပြီးခဲ့သည့်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီကဲ့သို့တူညီသောအရေအတွက်ကလုပ်သောကဆိုသည်။ ငါးနှစ်, အပြည့်အဝ "ကြက်ဥတံခါးသည်ထိုင်ထိုင် ...
Metro အစ္စတန်ဘူလ်, အသန့်ရှင်း Metro, အစဉ်အမြဲသန့်ရှင်းတဲ့ Metro အားဖြင့် 30 / 01 / 2019 သန်း4ကျော်ခရီးသည်ရှင်းလင်းရေးသောမက်ထရိုကိုအသုံးပြုဖို့ဘယ်လို 8002တထောင်ကြိမ်သည်ထိုနေ့, အစဉ်အမြဲကျန်းမာပတ်ဝန်းကျင်တွင် 844 ကျော်ခရီးစဉ်ကိုအောင်ဘို့သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းများနှင့်အတူ၎င်းတို့၏သန့်ရှင်းရေးလှုပ်ရှားမှုများဖြည့်ဆည်းဖို့ခရီးသည်မှအရည်အသွေးမြင့်ဝန်ဆောင်မှု၏နိယာမကိုလက်ခံရန်အစ္စတန်ဘူလ်က Metro အစ္စတန်ဘူလ်နှင့်အတူ 100 မော်တော်ယာဉ်စင်းကို။ ကျနော်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုအသုံးပြုဖို့ကိုဘယ်လိုသန့်ရှင်းတဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏မေးခွန်းကိုစိတ်ထဲထံသို့မရောက်ရ။ အချိန်၏အဆုံးအားဖြင့် Metro အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖြစ်အစ္စတန်ဘူလ်တွင်တည်ရှိပြီးထိုအကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများထဲကတစ်ခုမှာအလုပ်သန့်ရှင်းရေး, လာမယ့်နေ့အဘို့ပြင်ဆင်ထားရန်ကစတင်ခဲ့သည်။ ကားဂိုဒေါင်ဧရိယာခေါ်ဆောင်သွားအားလုံးယာဉ်များ၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးအချိန်နှင့်အတူ ...
AK ပါတီ Kayseri လက်ထောက် Yasar Southwind Kayseri "အထိတိုးချဲ့တံ့သောမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်ပြဿနာရှိကြောင်း။ 24 / 02 / 2012 AK ပါတီ Kayseri လက်ထောက် Yasar Karayel, Kayseri မှတိုးချဲ့တံ့သောမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်ပြဿနာရှိကပြောသည်။ တူရကီနှင့် Yasar Karayel ဖျော high-speed ကိုရထားစီမံကိန်းအလုပ်၏အဆက်အကြားခရီးစဉ်ကြာချိန်၏စည်းကမ်းချက်များကိုအတိုကောက်ဖို့ရာအတူ Kayseri, "အဲဒီမှာတူရကီ-Kırıkkaleအကြားစီမံကိန်းအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုဒီစီမံကိန်းအတွက်တင်ဒါ Yozgat ပြီးနောက်။ ကြီးနှင့် Kayseri အကြားလိုင်းလေလံကျင်းပသွားမှာပါ" ဟုသူကပြောသည်။ လိုင်း Kayseri ဆိုရှားပါးမှုခြေ Southwind ရှိကြောင်းမှုကိုအလေးအနက်, "အဲဒီ Kayseri ခြေလျင်တင်ဒါပါလိမ့်မည်ပြီးတဲ့နောက်တူရကီ-Yozgat အကြားလိုင်း။ ပြီးစီးခဲ့ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်" ဟုသူကပြောသည်။ ရင်းမြစ်: ငါ့အ www.medyaxnumx.co
ဘယ်မှာရထားမယနေ့အဘယ်သူမျှမ Dalaman မီးရထားဘူတာအထိ 27 / 02 / 2019 မီးရထားဘူတာရုံများကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ခံစားမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်ရှိရာအထူးသောနေရာများဖြစ်ကြသည်။ ပြိုကွဲယခုအချိန်အထိတို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်ရှိနေကြသည်, သူတို့ကလည်းသူတို့ကိုအများကြီးဝမ်းမြောက်သောစိတ်ဆံ့။ ရထားဖြည်းဖြည်းချင်းတစ်ဦးအပြေးပြိုင်ပွဲအပေါ်ကို run ခြင်းနှင့်အဆုံးမှာ helplessly ပလက်ဖောင်းရပ်တည်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေမှအရှိန်ခြေလှမ်းများ, ရထားယူစတင် ... ဒါပေမယ့်မီးရထားခရီးသည်မှနှုတ်ဆက်ပြော, သင်ဝှေ့ယမ်းရပ်တန့်ဘယ်တော့မှသည်အထိ ... ငါ wont ဘယ်တော့မှလျှင်ပင်တစ်ခုတည်းရထားတွေးမိပျောက်သွားအခါလှည်းင်းဒိုးကနေ swinging လက်စွဲ ရထားဘူတာရုံရှိခြင်းအဖြစ်ရှိသလော အခြေအနေကိုကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်ကောင်းမတူနိုင်တဲ့ကြောင်း ... ဒါပေမယ့်ဟုတ်ကဲ့, ထိုကဲ့သို့သောဘူတာရုံရှိသေး၏။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ, Mugla ၏ချစ်စရာကောင်းမြို့မှာနှစ်ဦးစလုံး ...
အဘယ်အရာကိုမျှဤမျှလောက်ငါမြန်နှုန်းမြင့်ရထားမျှော်လင့်ထားပါဘူးမျှော်လင့်ထား 30 / 05 / 2013 ယနေ့ငါရဲ့စီးပွားရေးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်အများဆုံးလျင်မြန်စွာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရထားတဦးတိုးမြှင့်ပိုအချက်များကြွလာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သကဲ့သို့ငါဘာမှမမျှော်လင့်ထားပါဘူး။ ဤအကြောင်းကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ, အဓိကအားဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်တည်နေရာ၏ပြဌာန်းခွင့်အတွက်အကောင့်ဟာမတူကွဲပြားမှုများနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှထပ်ပြောသည်။ ဒီသင်တန်းရဲ့ကမ္ဘာ၏ဦးဆောင်နိုင်ငံတွေ၏ဆိပ်ကမ်းမြို့မှာရှိတဲ့အာရုံစူးစိုက်မှု .. ကုန်တင်မသာ, ကုန်ကျစရိတ်အချက်အနောက်နိုင်ငံများနှင့်အထူးသဖြင့်တူရကီနိုင်ငံအဘယ်ကြောင့်စက်မှုလုပ်ငန်း .. ပိုက်ဆံဖြင့်တိုင်းတာမရနိုငျသောကုန်ကျစရိတ်ကို install ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အခါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများညှိနှိုင်းမှုကြာကာလ "အချိန်တန်ဖိုး" အတွက်ခရီးသွားသည့်အခါမှုကြောင့်လမ်းများ, ကုန်စည်ဖြစ်ပါသည် သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှု .. အပြင်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှအလှူငွေ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အခြေအနေများ၏တိုးတက်မှုအကဲဖြတ်ရန်ရုံမှားယွင်းနေပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ဖြင့်ခေတ်ပြိုင် ...
အစ္စတန်ဘူလ်အသွားအလာဒီတော့အစိမ်းရောင်ဖူး 01 / 01 / 2016 အစ္စတန်ဘူလ်အသွားအလာဒီတော့အစိမ်းရောင်ဖူး: ခရစ္စမတ်တစ်အားလပ်ရက်3ရက်ကြောင့်မိုဃ်းပွင့်၏အိမ်တော်ထွက်ခွာသောအခါအစ္စတန်ဘူလ်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အသွားအလာသက်သာရာ။ လုံးဝမှုတ်တံတားများ,2သန်းလူများ Metrobus သွားရောက်နဲ့မီထရိုမှတ်တိုင်များတိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏သောနေ့ကို။ ကြောင့်ခရစ္စမတ်အားလပ်ရက်များနှင့်ဆီးနှင်းရက်ပေါင်းçıkmayıncaအိမ်တော်ကိုတို့ကအစ္စတန်ဘူလ်၏3ရန်, အစ္စတန်ဘူလ်တိတ်ဆိတ်မြို့၌သင်္ဂြိုဟ်လေ၏။ သူကယာဉ်အသွားအလာနှင့်လူမျိုး၏သိပ်သည်းဆသစ်ကိုယခုနှစ်အစောပိုင်းနာရီကြာ၏တိတ်ဆိတ်နှင့်အတူအရပျစှနျ့အစ္စတန်ဘူလ်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်နှစ်သစ်ကူးဧဝကိုအပေါ်အစဉ်အဆက်အတွေ့အကြုံရှိဆီးနှင်းအစိမ်းရောင်ဖူးပါ။ ဒါဟာအစ္စတန်ဘူလ်အသစ်များကိုအားလပ်ရက်ဖြည့်စွက်အတွက်စနေနေ့နှင့်တနင်္ဂနွေလည်းသောကြာနေ့ကနှစ်သစ်ကူးနှင့်အတူတိုက်ဆိုင် ...
ကူးတို့အစဉ်အဆက် Izmir အတွက်စောင့်ဆိုင်းရန်ဒါသာယာသောခဲ့Olmamış 17 / 11 / 2018 အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အသုံးပြုမှုကိုİzmirlilerနှင့်ရံဖန်ရံခါချိုမြိန်အံ့အားသင့်ရင်ဆိုင်။ ကိုယ့်မြူနီစီပယ်ရဲ့ကူးတို့ဆိပ်ခံတံတားနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဖျော်ဖြေပွဲအဖြစ်ဘူတာရုံ "Young ကအဆင့်" မှာကျင်းပခဲ့တယ်။ ခရီးသည် "ကူးတို့ချောင်းမြောင်း, ဤမျှလောက်ပျော်စရာဖူး" dedirtti ထွက်အလုပ်လုပ် Alsancak ဆိပ်ခံတံတားမှာနေတဲ့လူငယ်ဂီတသမားတို့အတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့စင်မြင့်။ ထိုကဲ့သို့သောမက်ထရိုဘူတာအဖြစ်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, လှုပ်ရှားမှုများ၏ "Young ကရှုခင်း" ကူးတို့နယ်ပယ်များနှင့်ဖျော်ဖြေပွဲအတွက်ဆိပ်ခံတံတားမှာအံ့သြစည်းရုံး။ ကျောင်းသားများပါဝင်သည်ဟု Conservatory နှင့်ဂီတအဖွဲ့များကြွေးကြော်သံနှင့်အတူညနေပိုင်းတွင် "တစ်ဦးက Short လူငယ်များသို့" အလုပ်İzmirမှဂီတ၏အဘို့ပှဲကိုဆွဲဆောင်။ ဤအချိန်ငယ်ရွယ်ဂီတသမားများ၏လုပ်ဆောင်မှုများ၏နယ်ပယ် Alsancak ကူးတို့ဆိပ်ခံတံတားအတွက်စင်မြင့်ကိုယူ ...
Bayrampaşaဇူလိုင်လ 15 အာဇာနည်နေ့ဘတ်စ်ကားဘူတာ
သငျသညျ Sekaray Trackless Cable ကိုကားတစ်စီးလမ်းရထားငါ Verel ဖြစ်သွားဖြစ်သွား
ကူးတို့အစဉ်အဆက် Izmir အတွက်စောင့်ဆိုင်းရန်ဒါသာယာသောခဲ့Olmamış